PRODUCTS - B2B Gaming (mm)
White Label အွန်လိုင်းကာစီနိုစနစ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ White label အွန်လိုင်းကာစီနိုဖြေရှင်းချက်သည် လုပ်ငန်းများ၏တောင်းဆိုမှုများအတွက် အထွတ်အထိပ်ရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးပြီး ကျွန်တော်တို့၏ဖောက်သည်များကိုလည်း ခိုင်မာပြီးအားကောင်းသော အွန်လိုင်းကာစီနိုပလက်ဖောင်းများပိုင်ဆိုင်စေရန်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်၊၊
အော်ပရေတာတစ်ခုအနေဖြင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သောအွန်လိုင်းဂိမ်းလုပ်ငန်းတွင် သင်၏အွန်လိုင်းကာစီနိုကိုချပြရန် သင်၏လက်ထဲတွင် ကိရိယာအားလုံးရှိနေရမည်ဖြစ်သည်၊၊ သင်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများနှင့် အသင့်ဖြစ်သောစနစ်များပါဝင်သည့် B2Bဂိမ်းကို သင့်အွန်လိုင်းကာစီနိုသို့တပ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်လိုက်အားခြင်းဖြင့် သင့်အနေဖြင့် သက်တောင့်သက်သာရှိလှမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်၊၊
သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်အား ကျေနပ်နှစ်သက်စေမည့် အဓိကအချက်မှာ သင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးပုံစံနှင့် ပစ်မှတ်ဈေးကွက် အပေါ်မူတည်၍ ငွေသားဆိုဒ်တစ်ခု (သို့) အေးဂျင်းဆိုဒ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ရန် ရွေးချယ်ခွင့် ရှိခြင်းအားဖြင့် မော်ဒယ်နှစ်ခုကိုအမြဲတမ်း အကောင်းဆုံး အပြန်အလှန်ထိန်းထားနိုင်ပြီး ပါဝင်သူအားလုံးကိုလည်း အပြန်အလှန်အကျိုးအမြတ် နှင့် မျှတမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊၊
ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်သည် သင့်လုပ်ငန်းကို လွယ်ကူစွာတိုးတက်လာနိုင်မည့် စနစ်ကိုထည့်သွင်းထားသည့်အတွက် ငွေသားဆိုဒ်များအတွက်
တွဲဖက်စနစ်တစ်ခုအဖြစ်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ၊၊ သို့သော် အေးဂျင့်ဆိုဒ်အတွက်မှာမူ သင့်အားဝန်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့် သင့်အေးဂျင့်ကွန်ရက်ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် ပြည့်စုံသောအေးဂျင့်ဖွဲ့စည်းပုံရှိခြင်းမှသာအကျိုးအမြတ်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်၊၊
၎င်းအပြင်၊ စနစ်ထည့်သွင်းထားသည့် B2B ဂိမ်း White labels များအားလုံးသည် ကျွန်တော်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ရိုက်ဖဲဝေသူဂိမ်းများ၊ sportsbook ၊ရိုးရာဗီဒီယိုစလော့များ နှင့် ထီဂိမ်းများဖြင့် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ၊၊ ကျွန်တော်တို့သည် သင့်၏ကစားသမားများ အကြိုက်တွေ့စေမည့် ခေတ်မှီသောဗီဒီယိုစလော့များနှင့် ဆက်ဆီတိုက်ရိုက်ခုံများကိုလည်း မကြာမှီရောင်းချပေးတော့မည်ဖြစ်သည်၊၊
B2B ဂိမ်း White labels သည် ကျွုန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းများနှင့်လည်ပတ်နေသည်၊၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် B2Bဂိမ်းမဟုတ်သော အွန်လိုင်းကာစီနိုးဆိုဒ်တွင် ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော (သို့) အရည်အသွေးကောင်းသောဂိမ်းများကိုပေါင်းထည့်လိုသော မည်သူကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့၏ B2B ဂိမ်း API ကိုပေးပါသည်၊၊
သင့်အနေဖြင့်စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆွေးနွေးရန် ကြိုဆိုပါသည်
သင်၏ White Lable အွန်လိုင်းကာစီနိုကို B2B ဂိမ်းတပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏ White Label ဆိုဒ်သို့
သင်ပေါင်းထည့်နိုင်သော ကျယ်ပြန့် ပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားကျော်ကြားသည့် ကာစီနိုဂိမ်းထောက်ပံ့သူများထံတွင် တိုက်ရိုက်ဝင်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်၊၊
အကောင်းဆုံးသောဂိမ်းထိတွေ့မှုများပေးကမ်းခြင်းနှင့်အတူ သင်၏ဆိုဒ်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ပါ၊၊ ထောက်ပံ့သူများထံမှ ဂိမ်းများကိုထပ်ပေါင်းခြင်းသည် သင့်အတွက်အဖြေဖြစ်နိုင်သည်၊၊ ထို့ကြောင့် B2B ဂိမ်းသည်၎င်းအခက်ခဲကို လွယ်ကူချောမွေ့စေမည်၊၊
၁. သင်၏ဆိုဒ်သို့ပေါင်းထည့်ရန် ကျယ်ပြန့်သော 3rd party ဂိမ်းထောက်ပံ့သူများ အဆင်သင့်ရှိခြင်း၊၊
၂. ထောက်ပံ့သူအား တိုက်ရိုက်ရှာဖွေရန်မလိုအပ်ခြင်း (သို့) တစ်ခြားစုပေါင်းသူများမှ API ဂိမ်း ရရှိခြင်း၊၊
၃. ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိသည့်ဈေးကွက်ကို အမြဲဖန်တီးသည့်အတွက် သင့်အနေဖြင့် အကောင်းဆုံး
၄. ဆက်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုအားလုံးသည် တိုက်ရိုက်ဖြစ်ပြီး ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်း နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာများအားလုံးသည်
လည်း B2B ဂိမ်း တစ်ခုတည်းနှင့်သာသက်ဆိုင်ခြင်း၊၊
B2B ဂိမ်း White label စနစ်အသုံးပြုသည့် အော်ပရေတာတစ်ဦးဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းတရားများ
သင်၏ White Lable အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်သို့ အချိန်မရွေးပေါင်းထည့်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင်
အောက်ပါ ထောက်ပံ့သူများကို ရရှိနိုင်ပါသည်၊၊